Etu ị ga -esi nwetaghachi foto ehichapụ WhatsApp na iPhone & gam akporo
By Onye Kraịst TMLT Nwere ike 4, 2022 Technology 0 Comments
- Weghachite foto WhatsApp ehichapụ -
Ị maara na ị nwere ike weghachite foto ehichapụ na Whatsapp gị? Edemede a kpuchiri ụzọ kachasị mfe na ngwa ngwa ị nwere ike weghachite ha.
WhatsApp bụ akụkụ dị mkpa nke nkwukọrịta anyị kwa ụbọchị, yana nke ọ bụla enweghị ozi na-akụda mmụọ nke ukwuu. Ọ dị ka nrọ efu ịtufu onyonyo WhatsApp gị.
Mana ọ bụ ihe ijuanya na ọ na -eme ọtụtụ oge karịa ka ị mara, ọ dịghịkwa mfe iweghachite foto WhatsApp ndị a ehichapụ ọ gwụla ma ị nwere usoro siri ike dịka mmemme mgbake maka WhatsApp.
Memoji maka gam akporo
Nbanye Microsoft na Ndenye Akaụntụ Outlook
Ụzọ Ị Pụrụ Imegharị Kọmputa maka Ego nkịtị
Ebee ka echekwara foto WhatsApp?
A ga -echekwa ihe onyonyo niile ezitere na kọmputa gị ma ọ bụ nata site na WhatsApp na -akpaghị aka.
Ị nwere ike ịchọta mgbasa ozi sitere na onye ozi a na smartphones na -agba gam akporo na folda akpọrọ WhatsApp na ebe nchekwa dị n'ime.
Enwere folda nchekwa atọ n'ime ndekọ WhatsApp. Mepee "Media" wee chọta "Ihe onyonyo WhatsApp" wee gafee ọdịnaya ya.
Na mkpokọta, ọ bụrụ na ewepụla foto na nkata mana ọ bụghị na gallery gị, ị ga -ahụ ya na folda ahụ.
N'ime ụfọdụ ekwentị na ụdị mbadamba, a na -echekwa folda nwere faịlụ WhatsApp na ngwaọrụ nchekwa mgbasa ozi mbughari, dịka ọmụmaatụ, kaadị ebe nchekwa micro SD, kama na ebe nchekwa.
Nke a na -emekarị ma ọ bụrụ na ịnwere ngwaọrụ ndị China nwere ngwa gbanwetụrụ (gbanyere mkpọrọgwụ).
Etu ị ga -esi nwetaghachi foto ehichapụ WhatsApp na iPhone
Naghachi foto WhatsApp ehichapụ na iPhone ozugbo
Soro n'okpuru mfe nzọụkwụ naghachi gị ehichapụ WhatsApp foto gị iPhone.
Cheta na: Ị nwere ike ịda naghachi WhatsApp foto gị iPhone ozugbo site na iji ngwá ọrụ a. Ị nwere ike na-agbalị naghachi na iTunes ma ọ bụrụ na ị kwadoro tupu.
Download Dr.Fone na ẹkedori ya na kọmputa gị, na pịa Data Recovery.
Jiri eriri USB jikọọ iPhone gị na kọmputa gị wee họrọ Naghachi data iPhone.
Pịa "WhatsApp na Mgbakwụnye".
Pịa “Malite ianomi” ka inyocha foto WhatsApp ehichapụ.
Mgbe nyochachara, ihe ndị enwetara ga-apụta na edemede.
Họrọ ihe ịchọrọ iweghachi wee pịa "Naghachi na Kọmputa".
Weghachite foto/eserese WhatsApp ehichapụ site na ndabere iTunes
Nzọụkwụ 1: Download & ẹkedori Dr.Fone - Data Recovery (iOS)
Ibudata ma malite ngwanrọ a, pịa Iweghachite data.
Họrọ naghachi iOS Data wee họrọ naghachi si iTunes ndabere File taabụ.
All iTunes ndabere faịlụ na kọmputa gị ga-egosipụta.
Họrọ faịlụ nke nwere onyonyo WhatsApp furu efu gị wee nyochaa faịlụ site na iji “Malite ianomi”.
Nzọụkwụ 2: Enwetara foto WhatsApp
Mgbe nyochachara, lelee data wee họrọ faịlụ WhatsApp ịchọrọ ịgbake.
Pịa “Naghachi” iji chekwaa faịlụ na kọmputa gị.
Ị nwekwara ike ịchekwa ha ozugbo na iPhone gị.
Naghachi foto/eserese WhatsApp ehichapụ site na ndabere iCloud
Ngwá ọrụ a nwa oge naanị na-akwado mgbake si iCloud n'okpuru ios 10.2. Ma ọ bụghị ya, ị nwere ike jikọọ gị iCloud akaụntụ mgbe iji ngwá ọrụ a.
Nzọụkwụ 1: Ẹkedori Dr.Fone Toolkit
Ẹkedori Dr.Fone Toolkit, pịa Data Iweghachite.
Họrọ Naghachi iOS Data wee gaa naghachi site na iCloud ndabere File taabụ.
Banye na akaụntụ iCloud gị.
Lelee faịlụ ndabere iCloud niile.
Họrọ faịlụ nke nwere ihe WhatsApp ehichapụ.
Budata faịlụ na kọmputa gị ma ọ bụ ozugbo na iPhone gị.
Nzọụkwụ 2: Nhazi ngwa ngwa
Họrọ mgbakwunye WhatsApp na mpio mmapụta iji belata oge nyocha.
Nzọụkwụ 3: Naghachi Ugbu a
Mgbe inyochachara, hụchalụ faịlụ wee họrọ onyonyo ịchọrọ ịgbake.
Pịa “Naghachi” iji chekwaa data na kọmputa gị ma ọ bụ ozugbo na iPhone gị
Etu ị ga -esi nwetaghachi foto ehichapụ WhatsApp na gam akporo
Ọ bụrụ na ị furu efu WhatsApp oyiyi na ị kwadoo gị data na kaadị SD, ị nwere ike na-agbalị iji ngwá ọrụ a naghachi ya.
Kwụpụ 1: Edegharịala
Mgbe furu efu data WhatsApp, edegharịla ya. Emelitela faịlụ ma ọ bụ zipu ozi ọzọ, ịnwere ike tufuo data ruo mgbe ebighi ebi.
Nzọụkwụ 2: Download na Ẹkedori Dr.Fone - Data Recovery (gam akporo)
Download na wụnye software na kọmputa gị
Jiri eriri USB jikọọ ngwaọrụ Android gị na kọmputa gị.
Nzọụkwụ 3: Dezie Ngwaọrụ
Kwado nbipu nke ngwaọrụ gam akporo gị.
N'ihi na debugging, soro ntuziaka Dr.Fone - Data Recovery (gam akporo).
Kwụpụ 4: Họrọ Ụdị Data
Ugbu a họrọ ụdị data ịchọrọ i scanomi. Ị ga -enwe ndepụta nhọrọ, gụnyere kọntaktị, ozi, vidiyo, akụkọ ihe mere eme oku, gallery na ihe ndị ọzọ.
Họrọ "Ozi WhatsApp na Mgbakwụnye" ka inyocha faịlụ.
Kwụpụ 5: Wepụta oge ndị ahụ
Mgbe nyocha ahụ mechara, họrọ onyonyo WhatsApp ịchọrọ ịgbake wee pịa “Naghachi” ka ị nweta foto gị ehichapụ.
Etu ị ga-esi weghachite onyonyo WhatsApp site na nkwado ndabere
Na mgbakwunye na folda "Media", enwere ndekọ "Backups" n'ime folda WhatsApp ebe echekwara ndabere niile.
Messenger na -emepụta ha na akpaghị aka otu ugboro n'ụbọchị/izu/ọnwa ma ọ bụrụ na enyerela ọrụ a na ntọala. A na -emepụta ndabere kwa abalị na ndabara.
Ọ bụrụ na ihichapụla foto sitere na gam akporo Gallery na/ma ọ bụ nkata ezitere ihe karịrị otu ụbọchị gara aga, gbalịa nwetaghachi ya na nkwado ndabere na mpaghara. Iji nwetaghachi onyonyo ma ọ bụ nkata site na nkwado ndabere, ị ga-emerịrị:
Wepu onye ozi WhatsApp.
Tinye nọmba ekwentị gị ka ịbanye na akaụntụ gị.
Mgbe sistemụ na -atụ aro iweghachite data site na nnomi ndabere gị, kwenye na ya.
Chere ka usoro nrụnye na mgbake mezue.
Cheta na nkwado ndabere gị nwere faịlụ ndị ị nwetara n'ime izu gara aga. O yikarịrị ka akwụkwọ ndị ị na -achọ agaghị adị na ebe ndebe akwụkwọ ahụ.
Ọzọkwa, anyị na-adụ ọdụ ka ịmepụta ndabere kwa ụbọchị iji gbochie ihichapụ foto/data na mberede. Ị nwere ike ime ya site na ntọala dị na ngalaba "Chats" a na-akpọ "Nchekwa Chats".
Etu ị ga-esi nweta Internetntanetị n’efu na android ma ọ bụ iPhone
Saịtị ibudata Ebooks efu n'iwu
Otu esi edozi kọmpụta na -agaghị egwu vidiyo
Anyị nwere olileanya na ị hụrụ akụkọ a n'anya nakwa na ọ baara gị uru nke ukwuu. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ma ọ bụ aro, biko ọ ga-adị mma ka ị hapụ nkọwa yana kwa, soro ndị enyi gị kerịta akụkọ a.
Tags:otu esi eweghachi foto ehichapụ na whatsapp iphone, esi eweghachi foto ehichapụ na WhatsApp na samsung, otu esi eweghachi foto ehichapụ na WhatsApp na -enweghị nkwado ndabere, otu esi eweghachi foto whatsapp na android, Naghachi foto WhatsApp ehichapụ site na onye na -ezipụ ya
Otu esi edozie njehie “ajọ usoro nhazi ozi” na Windows 10
Nhọrọ Mgbakwunye Batrị MacBook ị ga -amatarịrị
Ogologo oge ole ka ọ na-ewe iji mụta Java: Can I Learn Java in a Month?
Balance Kaadị EBT nke South Carolina: Nzọụkwụ dị mfe iji lelee itule gị